Madaxweynaha Soomaaliya oo si rasmi ah u furay shirka (New Deal-ka) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow ka furay garoonka diyaaradaha Shirka looga hadlayo arrimaha Hiigsiga, iyadoo shirkan uu socon doono muddo labo maalmood ah.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galaya ilaa wakiilo ka socda 30 dowladood, ururo caalami ah, xubnaha Labada gole ee dowladda, Maamulada Gobolada dalka, Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada iyo wafuud kale.
Madaxweynaha oo ka hadlayay furitaankii shirka ayaa sheegay in lix bilood kadib shirkii Hiigsiga ee Copenhagen laga gaaray horumaro dhinacyada, siyaasada, ammaanka iyo dhaqaalaha.
Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qiray in aanay sanadka 2016 doorasho qof iyo cod dalka ka dhici karin dalka.
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo shirka ka hadlay ayaa sheegay inay daba geli doonaan baaqa ka soo yeeray labada gole ee ah in dalka doorasho ka dhici karin sanadka 2016 oo ah qof iyo cod.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo isna kulanka ka hadlay ayaa isna ka akhriyay go’aankii Xukuumadda iyo Baarlamaanka ee ahaa in aanay dalka doorasho qof iyo cod ka dhici karin, sidaas darteed loo baahan yahay in qorshayaasha looga bixi karo marxaladan tan xigta laga tashado.
Wariyeyaasha oo markii hore goob joog ka ahaa shirka ayaa markii khudbadaha ay dhameeyeen Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha iyo Nicholas Kay waxaa loo saaray dibadda.
Ajandayaasha shirka ayaa waxaa ku jira khudbado ay jeedinayaan Madaxweynayaasha Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo aanay shirka ka soo qeyb gelin.
Hase ahaatee waxaa taa bedelkeed khudbado ka jeedinaya shirka Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed iyo Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Shirkan ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro war murtiyeed quseeya xaalada dalka iyo barnaamijka hiigsiga sanadka 2016.
R/wasaaraha oo khudbad ka jeediyay Shirka New Deal ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho